Dab Khasaare Geystay oo ka Kacay Warshad Dharka Sameysa oo ku Taalla Waddanka Masar – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dab Khasaare Geystay oo ka Kacay Warshad Dharka Sameysa oo ku Taalla Waddanka Masar
On Mar 11, 2021 258 0
Wararka naga soo gaaraya waddanka Masar ee dhaca waqooyi-bari qaaradda Afrika ayaa waxay ku waranayaan in dab xooggan oo khasaare kala duwan geystay uu ka kacay qeybo ka mid ah wadaankaas.
Dabka ayaa wuxuu si gaar ah uga ka kacay gudaha warshad sameysa dharka oo ku taalla magaallada Al-cabuura ee gobolka Qalyuubiya oo ku yaalla waqooyi-bari magaaladda Qaahira ee caasimadda waddanka Masar.
Dabkaan oo ahaa mid aad xooggan ayaa kufiday dhismayaal u dhow warshadda uu ka kacay, wuxuuna geestay khasaase culus oo isugu jira naf iyo maal intaba.
War kasoo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka ayaa lagu sheegay in dab aan la ogeyn ilaa iyo hadda waxa sababay uu ka kacay dhismaha warshadd dharka sameysa oo ka kooban 4 dabaq oo ku taalla magaalda Al-cabuura.
Agaasimaha ciidanka amniga ee gobolka Qalyuubiya Sareeye gaas Fakhri Al-carabi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dabkaan uu sababay dhimashada 20 ruux iyo dhaawaca 23 kale wuxuuna intaas raaciyay in dadka dhaawacyada ah loo qaaday isbitaalka Al-Salam oo ku yaalla isla magaalada halkaasna lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in qolyaha dab damiska ay ka daaheen inay gaaraan goobta uu dabka ka kacay, taasoo keentay inay kororto tirada dadka wax ku noqday, iyagoona intaas ku daray in shaqaalaha gurmadka deg degga ah oo wata ilaa 11 gawaarida dab-damiska ah iyo 3 gaari oo Ambalaas ah ay goordambe soo gaareen goobta uu dabku ka kacay, waxaaana dadaalo dheer kadibna ay ku guuleesteen in ay damiyaan dabka.
Muuqaallo iyo Sawirro lagu baahiyay Baraha Internet-ka ayaa waxa lagu arkayay qiiq iyo uuro madow oo hawada isku shareertay oo ka baxaysay goobta uu dabka kacay iyo shaqaalaha dab-damiska iyo dadka magaalla oo dadaal ugu jira in ay damiyaan dabka si uusan goobo hor leh ugu faafin.
Tirakoob la sameeyay ayaa waxuu muujinayaa in 438.5 kun oo dab ah uu ka dhacay waddanka Masar 10-kii sano ee la soo dhaafay sidoo kale sanadkii 2019 oo kaliyah waxaa ka kacay 25,000 oo dab ah guud ahaan dalka.
Qiimaha khasaaraha hantida ee dabku sababay ayaa xogta lagu sheegay in 3.6 billion oo pound oo ku dhiganta 230 million dollars ay khasaartay 10-kii sano ee lasoo dhaafay halka khasaarada hantida uu geestay dabka sanadkii 2019 ay tahay 523 million oo pound oo u dhiganta 33.5 million oo doollar.